Amaforamu abazinikezele ukuba azinakekele, ikakhulukazi izinwele, nje zichichima imibuzo ngalokho kuyinto abicah liquid izinwele, kuyiqiniso yini ukuthi unikeza nomphumela imilingo, ke revitalizes izinwele futhi kubenza enhle? Kuphephile yini ukuyisebenzisa? Kodwa izihloko ezikhuluma ngale ndaba ababaningi.
Ngaphansi ketshezi abicah ngokuvamile waqonda buso kanye izinwele izifutho esekelwe abicah. Ngenxa yalokho-ke ngokuvamile kusho yakhiwa cishe ngo-50%. Nokho, izinwele kanye abicah kunezelwa kweminye imikhiqizo yezimonyo, ezifana amashampu, balms, isimo, izifutho futhi izinwele si.
Kuyini isizathu ithandwa kangaka? Silicone enezinto eziningi izakhiwo ezinhle: inikeza bucwebezele izinwele, abenze Fluffy ngaphezulu, kusiza ecwaninga futhi styling zivikela amathonya kwemvelo, ngisho ezivela ithonya elibi okushisa aphakeme. Ngenxa umphumela ukuthi abicah amajazi unwele ngalunye ezinjalo. Ukudala kuso ifilimu ukuthi ivikela izinwele emathonyeni zangaphandle, ngaphezu, abicah lembhali kuka ngenxa kukhanye futhi kalula ukubekwa ngenxa yokuthi ukuthi abicah ithobela uju yokuhlukanisa kube semikhawulweni wamuka izikali.
izindlela ezihlukahlukene ezisetshenziswa izinwele ezahlukene abicah nezakhi ezihlukene ngokomzimba futhi amakhemikhali. I amashampu kukhona silicones ungaphumi lapho ifakwa emanzini. Ayagezwa kalula off ngamanzi futhi foams kahle. Esikhathini imoto zivela ngaphansi amagama alandelayo: Trirnethylsilyamodimethicone noma Dimethicone Copolyol.
Isetshenziselwa izinwele futhi abicah izimonyo zempilo, njengezinga balms futhi isimo. Ukwakheka kwazo ngokwama-ngokuvamile ahlanganisa abicah amafutha. Kakade musa chaza emanzini, ugeze izinwele zabo zinzima kakhulu kunalezo iqembu yangaphambilini ye silicones. Ukufihla abicah amafutha ngokuvamile ngaphansi amagama Phenyltrimethicone, Cyclomethicone noma Dimethicone.
Elinye iqembu izimonyo, asebenzisa uketshezi abicah, - a mousses okusezingeni eliphezulu futhi isitayela lacquer, okumele ukuvikela izinwele emiphumeleni ukushisa kusukela dryer izinwele noma ayina. Ukwakheka izimonyo zibala silicones oluyingozi. Bona lapho zibizwa kanje: Cyclopentasiloxane & Dimethiconol noma Polydimethylsiloxane.
silicones Aminofunctional ukusiza ukugcina izinwele umbala emva ukudaya, elibangela ukuba basebenzise ngokufanele amatheksthi izinwele izimonyo. Encazelweni yalokho ukwakheka zivamise ohlwini ngaphansi amagama Amino Silicones Functional noma Aminopropyl Dimethicone.
Elinye iqembu abicah, okusezingeni eliphezulu polymer silicones asetshenziswa izimonyo professional. Batinikela umphumela nehlala njalo kakhulu, njengoba engahashazanga sina off ngamanzi. Nokho, cishe kunoma iyiphi silicones kodwa amanzi encibilikayo, kunzima ukugeza izinwele kuhle. Lokhu kusho ukuthi abicah phezu izinwele uye zanqwabelana impahla. Lokhu okwamanje yokuthi odokotela, wochwepheshe futhi beauticians are phikisana ngokuthi singakanani kungcono ukuyisebenzisela izinwele ukunakekelwa.
Futhi kukhona okuthize uxabana. Yiqiniso, umphumela ukuthi izinwele abicah kunzima ukuqhathanisa yini enye. Rumour has it ukuthi aphathwa imodeli izinwele ngaphambi kokudubula ekukhangiseni amashampu nopende. Kodwa ungakhohlwa ukuthi abicah akusho belaphe izinwele onesifo, efihla kubo ngaphansi ukungapheleli ifilimu. Lapho ubizwa wageza kusukela izinwele, babuyela bexhwalile yabo. Ngaphezu kwalokho, ukugeza off ngisho simple, njengoba sekushiwo. Le filimu ivikela hhayi kuphela izinwele, kodwa futhi kukhinyabeza ukugeleza komoya futhi izakhamzimba izinwele. Okuholela ngisho nangendlela ezibukeka ezingemnandi ngaphezulu izinwele emehlweni.
Kusukela zonke lezi zindlela osekukhulunywe sizwisise ukuthi abicah ngokuphelele ukuze ngokushesha sifinyelele eyigeza. Kodwa ukusetshenziswa njalo nokunakekela kudingekile ukukhetha ukuthi ulondoloza ngezinye izindlela. Kungenziwa alternated nabanye silikonosoderzhaschie kusho kanje: kanye ngesonto kusho abicah-based, lonke imoto evamile futhi isimo.
Isikhathi - Curly, ezimbili - Curly, noma kanjani ukuba avale izinwele curling
Hair Dye - Indlela ukugcina izinwele zakho ziphilile?
Unarc.dll ibuyise ikhodi yephutha 12: indlela yokulungisa?
Alan Dzagoev - Russian football ithalente
Uphi parotid salivary indlala? Ukuvuvukala indlala parotid: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Indlela ukubamba intendele ngaphandle kwezikhali
"Ufo" - epaki Kimry, Tver esifundeni. Incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Sortavala: ukuzilibazisa, amahhotela. Incazelo, amasevisi, amanani
Dupont: amakha kanokusho